Waa in aad mar hore laga war muhiimadda ay hayaan. Waxaa waajib ah in ay gurmad faylasha aad, waaba intaasoo aad si joogto ah iyaga waxaa laga yaabaa in laga badiyo. Iyada oo taageero ka files gurmad, waxaad ka heli rajo soo celinta sawiro aad xitaa haddii ay lumaan, tirtiray ama waxyeelo.
Dad badan oo jeer waxaa si ku dhici kartaa in aad daashid ee gacanta taageero ilaa sawiradaada. Xaaladaha noocaas ah, waxaa laga yaabaa inaad u baahan siyaabo by kaas oo aad awoodo gurmad sawirkaaga si toos ah sidii aad ku badbaadin doonaa dhibaato ah ee ay u qabanayaan naftaada. Technology ayaa soo waddo dheer oo aad ka heli karto ama qalab loo isticmaali karaa muddo ku dhow wax walba. Waa arrin aad u sahlan looga heli karo software iyo habab kale oo aad si toos ah ay dib kartaa sawiradaada iyo tan badbaadin doonaa waqti iyo dadaal Inaad.
Halkan waxaa ku qoran liiska 5 siyaabo oo loo isticmaali karaa si sahlan oo dhakhso gurmad automatic.
1.Google + Auto kaabta
Photos Google+ caawiyo in ay taageerto kor u sawirada kuwaas oo lala xiriiriyay in aad xisaabta Google+. Waxaad isticmaali kartaa habkaani labada macruufka iyo telefoonada Android. Marka aad isticmaalaysid app macruufka ah, si fudud aad riixi kartaa icon marsho iyo awood auto gurmad feature. Dhamaan sawirada aad si toos ah taageeray doonaa in aad xisaabta Google+.
Sidoo kale si aad u app android, jiheysan goobaha iyo si fudud guji auto gurmad iyo sawirada la isu taageeray doonaa. Geedi socodka taageerto kor u yahay mid aad u fudud oo waxaa gaar ahaan waxtar u leh kuwa isticmaalaan Gmail xisaabta ama ay Google muuqaal heshiis weyn.
Ilaa taageero Easy.
Keydin karaa tiro badan oo sawiro.
Sawiro yar 2048px in width, marka updated waxaa lagu tiriyaa hoos kaydinta lacag la'aan ah.
Google+ marnaba u suurtagashay in ay sumcad helaan.
Ma waxa ay jeclaan lahaayeen.
Waxaa jira hab ka mid ah 15 GB boos lacag la'aan ah, ka dib markii taas oo aad u baahan tahay in lagu bixiyo hagaajinta ah.
Shaki kuma jiro in mar walba uu sii ahaan doono mid ka mid ah hababka ugu fiican ee u auto raad raac ah oo sawiro. Waa in WordPress waxaa lagu tiriyaa la soo bandhigid xarunta of auto gurmad markii ugu horeysay. Noocan oo kale ah ayaa ay caan in xitaa maanta; WordPress weli doorashada hogaanka u dad badan.
Si fudud awood Upload camera aad app WordPress oo aad dooran kartaa in aad auto content taageeray in account DropBox aad. Xawaaraha waa la yaabka lahaa si degdeg ah oo geedi socodka waa mid aad u fudud.
Aad iyo aad si degdeg ah taageero ilaa
Aad lagu kalsoon yahay
Waxaad u hagaagsan karaa content ka qalab badan
Waxa kaliya la yimaado 2 GB oo ah meel bannaan oo lacag la'aan ah
Waxaan nahay oo dhan ka war caanka ah ee Flickr sida ay tahay mid ka mid ah goobaha ugu doortay aawadood oo ah wadaago sawiro aad. Waa mid ka mid ah portals sawir qaybsiga ugu habboon waayo waxay marnaba qaniinaa, sanamyadii. Waxaa la iman 1 TB ah meel lagu kaydiyo account per. Kuwa qaar ka mid ah sawir qeexidda ugu fiicnaa sare warqabaan cajiib u badan tahay in ay isticmaalaan portal sida bixinayo xalka ugu wanaagsan ee images waaweyn.
Iyada oo cusub Flickr 3.0 app, aad si toos ah u gali kartaa oo dhan sawirro in aad xisaabta Flickr. Sida uu jiro 1 TB meel bannaan, uma baahnid inaad wax laga walwalo qulqulaya ka kaydinta midkood. Waxa ugu fiican waa in sawirrada ayaa lagu wadaa inay gaarka ah taas oo macnaheedu yahay in aan dadka u heli karo ilaa aad u ogolaanaya inuu.
Boos lacag la'aan ah u ballaaran
Waxaa hayaa tayada images dhawrsan
Goobaha Great gaarka ah
Waxaa la ma ku haboon qof kasta sida qof walba ma isticmaalaa Flickr.
Waxaynu ognahay sida ay adeegyada daruur oo caan ah ayaa haatan. Marka aad isticmaalaysid adeegyada daruur, waxa kuu ogolaanayaa inaad si ay u dhawrto gurmad ah ee aad content on server daruurtii. Adeegyada daruur Amazon waxaa lagu yaqaan in ay isticmaalka ugu wanaagsan oo ugu kalsoonaan karo sidii DropBox ka dhigaysa adeegyada Amazon. Taasi laftigeeda ayaa cadeyn u yahay in ka mid ah waxa ay ka dhigeysaa Amazon sida magaca weyn iyo tan iyo kaydinta daruur waa ay ka walwalsan.
Waxaad si fudud u isticmaali kartaa adeegyada daruur iyo la app, noqon auto mooyee feature oo u adeega aad u baahan tahay.
Aad lagu kalsoonaan karo
Easy in ay doorato auto gurmad feature
Waxaa la iman 5 GB ee kaydinta xadidan
The app Amazon drive daruur kuma filna dareen leh si loogu isticmaalo.
Tani waa qalab kale oo awood leh oo ay Microsoft oo u muuqataa in ay doorashada xiiso leh. Waxaa inta badan lala beegsaday wajahan dadka isticmaala Windows laakiin ay u shaqayso ganaax ku macruufka iyo Android sidoo. Markii aad saxiixdo feature auto gurmad ah, waxaad ka heli doontaa 3 GB oo ah meel lagu kaydiyo oo dheeraad ah oo ay la socoto 7 GB waa in mar hore la joogo. Waxaa fudud in la isticmaalo iyo ogolaan karo gurmad fudud automatic ah sawirrada.
Qadar Good kaydinta free
Waa sahlan tahay in ay dib u kor sawiradaada
Sida ugu horrayn waa codsi Windows ah, oo aan dad badan oo isticmaala Android iyo macruufka waxaa la helay iyagoo u isticmaalaya.
Waxa jira waxyaabo beddelaad fiican.
Si xor ah u doortaan mid ka mid ah hababka iyo sawiro gurmad si toos ah oo aan mashaakil kasta oo
> Resource > Top List > Better Safe Badan Sorry: 5 siyaabaha loo kaabta Phone Photos toos ah